राज्यले चालक उत्पादन गर्न किन लगानी गर्दैन् ? सिटौला – newslinesnepal
राज्यले चालक उत्पादन गर्न किन लगानी गर्दैन् ? सिटौला
प्रकाशित मिति : २ पुष २०७६, बुधबार १७:३६
काठमाडौं, २ पुस । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सडक दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको चासोले आफूहरु खुशी भएको स्पष्ट पारे । उनले भने,‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले यातायातको क्षेत्रमा ध्यान दिनुभयो । यो खुशीको कुरा हो ।’
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले देशभरि ८४ हजार सडक रहेको आंकडा सुनाउँदै त्यसमा पनि १४ हजार सडक पिच रहेको सुनाए । ‘१४ हजार र ८४ हजारको बीचका सडकहरु बिना ईन्जिनियर बनाईएका छन् । सडकहरु अवैज्ञानिक छन् ।’ सिटौलाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि सबै निकाय जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘त्यसमा पनि सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ । उ जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । अहिले नेपालको यातायात क्षेत्रमा दश खर्बको लगानी छ । यो लगानी बचाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’